Best Forex Trading Platform na System | Software Forex - FXCC
Ị ga-atụ anya ka otu n'ime ndị na-elekọta ECN-STP brokas na-enye gị ihe kachasị ọhụrụ, ihe nkwụsị, nyiwe nke ịzụ ahịa
na FXCC anyị anaghị ada mbà. Ndị ahịa anyị nwere ike ịnweta ụlọ ahịa FX na ngwaọrụ kachasị mma; mobiles, tablets, laptops,
PC na site n'iji sava di iche. Onye anyị chọrọ ka anyị nwee ike ịnweta ahịa bụ MetaQuotes Software Corporation, nke
ndị na-emepụta ihe na ndị mmepe nke ụwa a ma ama, mmeri mmeri na ụlọ ahịa ahịa FX kachasị ewu ewu, MetaTrader 4.
MetaTrader 4 bụ usoro usoro nhazi nke a MetaQuotes Software Corporation. MetaQuotes Software Corp. bụ ụlọ ọrụ mmemme nke malitere ịzụ ahịa na 2000. Site na mmalite ya, ụlọ ọrụ ahụ amalitewo aha ọma na inwe ọganihu dị ukwuu n'ịzụlite ma na-enyefe iyi nke usoro ntanetị nke ahịa ọhụrụ, nke na-enweghị mgbagha, ọrụ na ngwọta n'ime ogige azụmahịa.
Ogologo nke ndị ahịa na mgbagwoju anya nwere ike ịzụlite iji zie ụdị ejiji na ọchịchọ ịmata ihe, site na iji ọtụtụ atụmatụ na uru dị na ntanetị MetaTrader, na-anọgide na-adịghị mma na ụlọ ọrụ ahụ. Otú ọ dị, maka ndị ahịa ọhụrụ na ndị na-enweghị ahụmahụ, ihe ntanetị dị iche iche: onye ọrụ enyi, dị mfe ma kwụ ọtọ iji mee ihe.
Ma ị bụ onye ahịa azụ oge na-achọ iji mekwuo ohere gị na ohere maka ihe ịga nke ọma, ma ọ bụ tụlee onwe gị ịbụ ọkachamara oge zuru ezu, onye chọrọ iji: ihe nkesa nzuzo nke onwe ma ọ bụ jiri usoro ịzụ ahịa algorithmic iji nweta ahịa na ọsọ ọsọ, MetaTrader nwere ezigbo ngwọta maka gị. Ọzọkwa, site na FXCC ị na-enwekwa nsogbu site na nhazi n'enweghị onye na-arụ ọrụ, ebe ị na-abanye n'ọdọ mmiri nke ndị na-enye ego site na netwọk ECN anyị na-enye. Ijide n'aka na interbank ruturu ma na-agbasa ị na-enweta bụ ezi ahịa ahịa nke ọnọdụ ugbu a.
FXCC na-enye usoro nhazi ndị a: 4 MetaTrader, MetaTrader 4 Mobile, MetaTrader 4 multi terminal na MAM (njikwa akaụntụ njikwa).
Gbalịa nyochaa anyị!
Na ndị ahịa MetaTrader 4 na-enweta otu n'ime ndị kasị ewu ewu ngwugwu trading trading na ụwa. Ị nwere ike ịdabere, na-arụ ọrụ, na ikpo okwu nwere ihe niile dị mkpa maka ịzụ ahịa na ihe onwunwe iji mee ka ndị ahịa nweta: nyochaa na nyocha, ịbanye ma na-apụ na ahịa na-eji ndị ọzọ na-arụ ọrụ na ngwanrọ, Expert Advisors (EAs). Ọ bụrụ na ị na - achọ ịga n'ihu ìgwè mmadụ na EAs nwere azụmahịa, mgbe ahụ MetaTrader emezikwala asụsụ nke ya - MQL4, na-enyere ndị ahịa aka ịhazi onwe ha ụgbọ okporo ígwè na-azụghị aka.
Download Ugbu a Mụtakwuo User Guide
Na-enyefe ngwaọrụ kachasị maka ngwaọrụ Forex trading.
Na MetaTrader 4 Mobile App na-arụzigharị ma mezue usoro ikpo okwu maka gam akporo na iPhone. Ngwa a pụrụ iche na-enye ndị ahịa aka ịhọrọ site na narị otu narị ụlọ ọrụ brokerage na-egwu maka azụmahịa ahịa. Usoro ihe omume ahụ na-enye ihe niile ahịa chọrọ iji nwee ike ịga nke ọma Forex trading. Ejiri n'elu ikpo okwu bụ: usoro zuru ezu nke iwu, ịkọ akụkọ ihe mere eme, eserese mmekọrịta, nchọpụta nyocha na nhọrọ kachasị ukwuu nke ngwaọrụ mkpanaka akwado.
Ndị ahịa na-eji MetaTrader 4 Mobile App enwe ọrụ dị ike maka trading Forex n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla n'ụwa. Achịcha dum nke nchịkọta na ịzụ ahịa nhọrọ dị maka ngwaọrụ mkpanaka.
Nbudata igwe na MetaTrader 4
Njikwa zuru oke maka akaụntụ ahịa
Ahịa site n'ebe ọ bụla 24 / 5
Niile ụdị usoro na igbu usoro
Ihe ngosi esemokwu mmekọrịta
Ụdị 3 dị iche iche: Ogwe, oriọna ọkụ Japan na akara agbajiri
9 timeframes: site n'otu nkeji ruo otu ọnwa
30 nke ihe ngosi mara mma kachasị ewu ewu
Ihe nyocha 23
Akụkọ nke azụmahịa
Free mobile chat na email
Nweta yaGoogle Play enweta ya naApp Store Mụtakwuo Ntuziaka Onye Ntuziaka Ntuziaka Onye Ntuziaka
Ejiri ya na 2006, MetaTrader 4 MultiTerminal bụ akụkụ nke nkwanye ùgwù ma kwanyere ùgwù nke MetaTrader 4 Online Trading Platform. A na-atụle MultiTerminal maka nhazi oge nke ọtụtụ akụkọ. Nke a bụ ebe dị oké ọnụ ahịa na ikpo okwu maka ndị na-elekọta ego, ma ọ bụ ndị na-elekọta ndị na-azụ ego na ndị ahịa na-arụ ọrụ na ọtụtụ akụkọ n'otu oge.
MT4 MultiTerminal na-agwakọta ọrụ na-eduzi ahịa nke na-ejikọta ire ahịa nke ọtụtụ akụkọ na iji arụ ọrụ. Usoro ihe omume ahụ yiri nke nke MetaTrader 4 Client Terminal. Ọ bụ usoro dị iche iche nke dị mfe ma dị mfe, na onye ahịa ọ bụla maara nke ọma n'iji MetaTrader 4 Client Terminal, nwere ike ịmatakwu ngwa ngwa.
MetaFX na-enye ngwa ngwa ahia ngwa ahia a maara dika MAM (Multi Account Manager) n'ihi na ndị ọkachamara na-azụ ahịa na-azụkwa ego ego. MAM na-enye ohere iji ọrụ ọ bụla edere ejiri rụọ ọrụ, na-eji ụzọ dị iche iche mara mma, na-arụ ọrụ na ọkachamara ọkachamara na ọtụtụ ndị ọzọ. Naanị ụfọdụ atụmatụ na uru gụnyere:
Server Side ngwa mgbakwunye emepụta ngwa ngwa igbu
Ngwa ngwa ngwa ahịa nke ndị ahịa maka mmezi nhazi ahịa
Akaụntụ efu efu
STP na akaụntụ nnabata maka mkpochapụ usoro, na ntinye ngwa ngwa na ntinye akaụntụ
"Ngalaba Group" na-egbu site na nchịkwa isi
Nlekọta akụkọ mkpechapụ anya nke iwu site n'aka mkpochapụ mkpochapụ nke Master
Full SL, TP & Na-echere usoro ịrụ ọrụ
Na-enye ndụmọdụ maka ọkachamara ọkachamara (EA) ịzụ ahịa nke akụkọ njikwa sitere n'aka ndị ahịa
Na-enye ohere ka a na-azụ ahịa na MT n'elu (nkewa dị iche)
Ngalaba Aka nke ọ bụla nwere mmepụta na akụkọ nyocha
Mee nlezianya na-elekọta nhazi n'ime MAM gụnyere P & L